HPA ကတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်တရားသူကြီးဆုကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတရားသူကြီးမှတ်စာဆုကို၏ HPA ကြေညာချက်များ Winner
တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတရားသူကြီးမှတ်စာဆုကို၏ HPA ကြေညာချက်များ Winner
29 သြဂုတ်လ 2016 (Los Angeles မြို့,, CA) - အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA) ကစက် Blackbird မှတီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းတရားသူကြီးမှတ်စာ Award ဆုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်®။ အဆိုပါစက်ရုံသည် Blackbird အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး® photoreal CG ကားများဖန်တီးသောပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝချိန်ညှိကားတစ်စီးတူးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ လောဘဂုဏ်အသရေအတွက် Skirball ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှာ 17th နှစ်ပတ်လည် HPA ဆုပေးပွဲ Gala မှာနိုဝင်ဘာလ 2016th, 11 ၏အကြောင်းပါလိမ့်မည် Los Angeles မြို့, CA.
တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက် HPA တရားသူကြီးမှတ်စာဆုကို workflow နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းပြောပြသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ကူညီပံ့ပိုးရန်ဖြစ်စေ, ထူးချွန်သရုပ်ပြကြသူကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကဂျူရီအဆိုပါစက် Blackbird ကိုရှေးခယျြ® မကြာသေးမီကတင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းနှင့် session ကိုတရားစီရငျ Los Angeles မြို့.
အဆိုပါ Blackbird တစ်သုံးနှစ်ကာလအတွင်းအဆိုပါစက်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး® ကားတစ်စီးရရှိနိုင်မှု, မော်ဒယ်တည်းဖြတ်မူများကို, တည်နေရာမှကန့်သတ် access ကိုများနှင့်ရိုက်ကူးလျင်မြန်စွာခေတ်မမီတော့ဖြစ်လာနိုင်သော: မော်တော်ကားကြော်ငြာများအတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးသောအခါကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်းရင်ဆိုင်ရပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်ရုံ Blackbird® ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကားတစ်စီးအပေါ်မှီခိုရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအချိန်မရွေးပစ်ခတ်ခံရနိုငျသောကားကိုတူးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ အလျား, အနံ, ဘီး, နှင့်ရေနံတူးစင်၏ရပ်ဆိုင်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒါမှမဟုတ်စျေးကွက်အပေါ်နီးပါးမည်သည့်ကားကိုတုမှချိန်ညှိသို့မဟုတ်ဖလှယ်မှုနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏လျှပ်စစ်မော်တာအမျိုးမျိုးသောမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံများ, နှင့် The စက် Blackbird တူအောင်ဖန်တီးရန်ပရိုဂရမ်နိုင်ပါသည်® ကင်မရာခင်းကျင်းခြင်းနှင့် 3D လေဆာစကင်နာ ပို. ပင်လက်တွေ့ကျကျ CG ပြန်ဆိုဘို့ပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို virtual မော်ဒယ်ထုတ်လုပ်ဖို့ pack မှာ။ ၎င်း၏ကြော်ငြာ applications များ, အ Blackbird ကျော်လွန်® နည်းပညာရှည်လျားထုတ်လုပ်ခြင်းမတိုင်မီသဘောတရားများကိုစမ်းသပ်ဖို့အများကြီးဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးမှုစည်းကမ်းများကိုနိုင်ပါတယ်။
အယ်လ် Thompson က, အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌ - အဆိုပါစက်မှတ်ချက်များ: "ကျနော်တို့အလွန်အမင်းယခုနှစ် HPA ဆုပေးပွဲမှာတီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဂုဏ်အသရေဆည်းကပ်ချီးမြှင့်ခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်; အဆိုပါစက်ရုံ Blackbird ရဲ့ရှေ့ဆောင်နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်တီးမှုအဘို့အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဆုချီးမြှင့်ခံရသည်ငါတို့အဘို့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံ Blackbird နဲ့® အယူအဆ, ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းသုံးနှစ်ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတကယ့်ကိုသင်အတူတကွစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးစိတ်အရတဲ့အခါသင်အောင်မြင်ရန်နိုင်သလဲဆိုတာကိုတစ်အံ့သြစရာသာဓကဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Blackbird ကိုဖန်ဆင်းသောငါတို့ကြော်ငြာဖောက်သည်များ၏စစ်မှန်သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ခဲ့® ဖြစ်ပျက်နှင့်၎င်းတို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ခံမှုနှင့် input ကိုက၎င်း၏ဒီဇိုင်းပုံဖော်နှင့်အဲဒါကိုဖြစ်လာခဲ့သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပြောင်းလဲနေတဲ့ဂိမ်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ "
ရှေ Hallen, HPA သမ္မတ, ကျွန်တော်တို့ကိုသည်အခြား HPA ဆုပေးပွဲအမျိုးအစားအပြင်ဘက်ဆုံးကြကြောင်းစိတ်ကူးများနှင့်နည်းပညာများကိုအတွက်ထူးချွန်အားဂုဏ်ပြုဘို့တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်တရားသူကြီးမှတ်စာဆုချီးမြှင့်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ အဆိုပါစက်ရုံ Blackbird®တစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်အမျိုးအစားပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သရုပ်ဖော်သောတီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုဘို့ပြီးပြည့်စုံ entry ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစက်ကို process ကိုအာဏာကြောင်းဖန်တီးမှုများအဖြစ်မော်တော်ယာဉ်ဒီဇိုင်နာများတာဝန်ထမ်းဆောင်တစ်ခုမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနည်းပညာတီထွင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Entries တွေကိုအလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြ, ကြှနျုပျတို့ထဲသို့ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ချီးကျူး။ "
တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်တရားသူကြီးမှတ်စာဆုချီးမြှင့်ဖို့ထို့အပြင် HPA ဆုပေးပွဲအရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်တည်းဖြတ်ရေး, အသံများနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအပါအဝင် 12 ယာဉ်အမျိုးအစားများအတွက်ထူးချွန်အသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်။ အခြားအထူးဆုချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့်, ဟင်းသီးဟင်းရွက် Dow, 2016 HPA တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့် honoree, နှင့်အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကို၏ဆုရရှိသူ၏လက်ခံရရှိသူအဖြစ်အမည်ရှိထားပြီးခဲ့သူ Michelle Munson မှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ 11th နှစ်ပတ်လည် HPA ဆုပေးပွဲများအတွက်လက်မှတ်များကိုယခုရောင်းချမှုအပေါ်ဖြစ်ကြပြီးမှာအွန်လိုင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည် www.hpaawards.com။ အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဟောလိဝုဒ် Professional ကအစည်းအရုံးမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.hpaonline.com. Blackmagic ဒီဇိုင်း, NAB ပြရန်, လွန်စွာလိုလားသော, ကုမ္ပဏီ 3, Deluxe, Dolby, EFilm, Encore, IMAX, Sohonet နှင့် Sony က အဆိုပါ 2016 HPA ဆုပေးပွဲ၏စပွန်ဆာအကြားရှိပါတယ်။ စပွန်ဆာများနှင့် congratulatory ကြော်ငြာအခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရှိနေဆဲ, မာရိ Vinton မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
HPA စက်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Virtual Global Town Hall အတွက်သတ်မှတ်သည် - ဇူလိုင်လ 23, 2020
HPA ဆုပေးပွဲများသည် Creative Categories တွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်ခေါ်ဆိုမှုကိုကြေငြာသည် - ဇူလိုင်လ 8, 2020
HPA စက်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို Leon Silverman ဥက္ကChair္ဌအဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 1, 2020
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ မွေလူးငှကျ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း တီထွင်ဖန်တီးမှု & ဆန်းသစ်တီထွင်မှု HPA ဖားအံဆု NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB16 nabshow အဆိုပါစက် 2016-08-31
ယခင်: element '' မီဒီယာစာကြည့်တိုက်သစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု Tools များနှင့်အတူ IBC ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်
နောက်တစ်ခု: DNF ဆမ်ရဲ့ Morpheus ၏စှမျးတိုးချဲ့ခြင်း